विश्वको सबैभन्दा महंगो सात ज्वेलरीहरु- एउटै औंठीको मूल्य ८ करोड डलर ! « News24 : Premium News Channel
विश्वको सबैभन्दा महंगो सात ज्वेलरीहरु- एउटै औंठीको मूल्य ८ करोड डलर !
काठमाडौं, १८ असोज । विश्वमा जुनसुकै मानिसहरु ज्वेलरी (गर-गहना)का पारखी हुन्छन् । सुन, चाँदी लगाएतका गर-गहनाहरु प्राय सबैले खरिद गरिहेकै हुन्छन् । तर डायमण्ड र एण्टिक चिजहरुबाट बनेको गर गहनाहरु खरिद गर्न सबैले सक्दैनन्, खरिद गर्न गह्रो पनि हुन्छ ।
यस प्रकारका गर-गहनाहरुको मूल्य करोडौं पर्ने गर्दछ । पछिल्लो समय यस प्रकारको गर-गहनाको क्रेज धेरै बढीरहेको छ । आज हामीले तपाईमाझ विश्वकै सात महंगो गर-गहनाहरुको बारेमा जानकारी गराउँदै छौं, जुन गर-गहनाको मूल्य करौंडौं डलर पर्दछ ।
१. विटल्सब्याक ग्राफ डायमण्ड रिंग
विटल्सब्याक ग्राफ डायमण्ड रिंगको मूल्य ८ करोड डलर तोकिएको छ । यो रिंग ३५.५६ क्यारेट डिप ब्लु डायमण्डबाट बनेको छ । यस डायमण्डको रिंग अष्ट्रेलिया र बोवारियन क्राउन ज्वेलरी मार्केटमा पहिलो पटक देखिएको थियो । त्यसपछि २००८ मा लण्डनको लारेन्स ज्वेलर्स ग्राफले यस डायमण्डलाई २.३४ करोड डलरमा किनेको थियो ।
लारेन्स ग्राफले यो डायमण्डलाई किनेपछि केही परिवर्तन गरिएको थियो । ग्राफले यसलाई परिवर्तन गरेपछि यस डायमण्डको मूल्य बढेको थियो । त्यसपछि यो डायमण्डलाई २०११ मा कतारका राज परिवारले ८ करोड डलरमा किनेको छ ।
२. पिंक स्टार डायमण्ड रिंग
पिंक स्टार डायमण्ड रिंगको मूल्य ७.२ करोड डलर रहेको छ । नोभेम्बर २०१३ ताका ग्राफ पिंक विश्वकै सबै भन्दा महंगो डायमण्ड रिंग थियो । यो रिंग ५९.६ क्यारेटबाट बनेको छ । यो डायमण्ड अफ्रिकाको खानीबाट निकालिएको थियो । सो समयमा यो १३२. ५ क्यारेटको थियो । तर यसलाई पगाल्दा ५९.६ क्यारेट रहन गएको थियो ।
सुरुमा यो डायमण्डबाट बनेको रिंगको मूल्य ८.३ करोड डलर राखिएको थियो । यस डायमण्डबाट बनेको सो रिंग इसाक वुल्फ नामका एक व्यक्तिसँग लामो समयसम्म रहेको थियो । त्यसपछि यो रिंग साउदी अरब पुग्यो । यो रिंगलाई साउदीमा बेच्दा ७.२ करोड डलरमा बेचिएको थियो ।
३. लिंकम्पेरेबल डायमण्ड नेकलेस
लिंकम्पेरेबल डायमण्ड नेकलेसको मूल्य ५.५ करोड डलर रहेको छ । सबै भन्दा महंगो गहनाको तेस्रो नम्बरमा लिंकम्पेरेबल डायमण्ड नेकलेस पर्न आउँछ । यो नेकलेस पनि विश्वकै सबै भन्दा महंगो गहनाको रुपमा चिनिन्छ ।
यो नेकलेस ४०७.४८ क्यारेट डायमण्डबाट बनेको छ । यो डायमण्डलाई १९८० मा सोनी बच्च्नीले डेमोक्रेटिक रिपब्लीक अफ कंगोमा भेटाएकी थिइन् ।
४. द ग्राप पिंक
द ग्राप पिंकको मूल्य ४.६२ करोड डलर रहेको छ । यसले सन् २०१०मा लिलामीको दौरानमा राम्रो रेस्पोन्स पाएको थियो । जहाँ यसले ४ करोड डलर मूल्य पाएको थियो । यो रिंगमा २४.७८ पिंक क्यारेटको डायमण्ड लागाइएको छ ।
२०१० मा ग्राफ लारेन्सले यसको मूल्य २.७ बाट बढाएर ३.८ करोड बनाएको थियो । पछिबाट यो २. ६२ करोडमा बिक्रि भयो ।
५. जोय डायमण्ड
जोय डायमण्डको मूल्य ३.२६ करोड डलर रहेको छ । यो डायमण्डबाट बनेको रिंग पहिलो पटक साउथको अक्शनमा देखिएको थियो । यो जोय डायमण्ड रिंग ब्लु डायमण्डबाट बनेको हो । यो रिंग अक्शनमा राखिएको थियो ।
अक्शनमा राख्नुपूर्व एक एक्स्पर्टका अनुसार यसको मूल्य १.५ करोड डलर पर्दथ्यो । तर सबै चकित यतिबेला भए कि, जब त्यस डायमण्डको रिंग अक्शनमा ३.२६ करोड डलरमा किनियो ।
६. द डायमण्ड बिकनी
द डायमण्ड बिकनीको मूल्य ३ करोड डलर रहेको छ । यो बिकनी फेबरिक डायमण्डबाट बनेको हो । यस डायमण्ड बिकनीलनई लगाएर पानीमा तैरिन सकदैन । यसलाई सुसेन रोजनले डिजाइन गरेको हो ।
यो १५० क्यारेड डायमण्डबाट बनाईएको हो । पहिलोपटक यो २००६ मा मोली मोली सिलिम्समा पेश गरिएको थियो ।
७. हुटन मेडिवनी जेडिएट नेकलेस
हुटन मेडिवनी जेडिएट नेकलेसको मूल्य २.७४ करोड डलर तोकिएको छ । यो डायमण्ड कम्पनी कार्टियरको चर्चित नेकलेस हो । यसलाई अक्शनबाट धेरै पटक किनिएको छ ।
यो नेकलेसमा २७ एम्बरलैड डायमण्ड लगाइएको छ । यसमा एक सुन्दर रुबीको प्रयोग पनि गरिएको छ । यो नेकलेसमा सुन र प्लाटिनमको आकर्षक रुपमा प्रयोग गरिएको छ ।
राजेन्द्र तारकिणी काठमाडौँ । ‘गेट अफ हेल’ अर्थात् ‘नर्कको द्वार’ भनेर चिनिने एउटा रहस्यमय गुफाको
अमेरिकामा भेटियो सुन्दर लामखुट्टे !
एजेन्सी । लामखुट्टेबारे जानकारी दिनुपर्दा सायदै कसैले ‘सुन्दर’ शब्द प्रयोग गर्लान् । तर साबेथेस क्यानियस
६० हजार सिँढी उक्लिएर पुग्नुपर्ने अनौठो होटल !
एजेन्सी । आफ्ना ग्राहकलाई फरक अनुभुति दिलाउन विश्वमा विभिन्न किसिमका होटेलहरु सञ्चालन गरिएका छन् ।
चक्कु प्रहारबाट गम्भीर घाइतेको ज्यान आलुचिप्सको खोलले जोगाएपछि…
एजेन्सी । न्यूयोर्कमा एक प्रहरी अधिकृतले चक्कु प्रहार गरिएका एक घाइतेको ज्यान आलुचिप्सको खोल र